Vaovao - Ny haben'ny tsenan'ny mpanentana oksizenina maneran-tany hijerena ny fitomboana tsy mitongilana mihoatra ny 2018-2026
Ny haben'ny tsenan'ny mpanentana oksizenina manerantany hijerena ny fitomboana tsy mitongilana amin'ny taona 2018-2026
Selbyville, Delaware, 12 Mey 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Araka ny voambolana manampahaizana, tsena mpanentana oksizenina eran-tany dia andrasana hampiseho fitomboana lehibe amin'ny ho avy, ka hahazoam-bola marobe amin'ny taona 2026. Ity fironana fanitarana ity dia vokatry ny fiakarana. ny aretin'ny taovam-pisefoana.
Ankoatr'izay, ny tatitra dia manadihady an'ity tsenambarotra ity momba ny faritry ny haitao, ny tanjaky ny vokatra ary ny faritry ny mpampiasa farany, noho izany dia manome antsipiriany momba ny fizarana indostrian'ny tontolon'ny sehatra tsirairay sy mamantatra ireo faritra mahasoa amin'ny famatsiam-bola ho avy. Ankoatr'izay, ny famintinana amin'ny antsipiriany ny tsena isam-paritra dia nohazavaina tao amin'ilay taratasy, miaraka amin'ny tontolon'ny fifaninanana izay manasongadina ny vitaly toy ny portfolio-n'ny orinasa, ny volany, ny fiaraha-miasa, ny fahazoana azy ary ny tsatokazo indostrialy.
Ho an'ny firaketana an-tsoratra, ny mpanentana oksizenina dia ampiasaina hamatsy ny reniranon'ny gazy misy harena oxygen amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny azota amin'ny loharano (ny rivotra manodidina azy indrindra) ary ny fampitomboana ny fatran'ny oxygen. Ampiasaina matetika izy ireo mba hanomezana oxygen oksiônika ho an'ireo marary mijaly amin'ny fatran'ny oksizena ambany ra.
Ny fisondrotan'ny geriatrika olona izay mora tohina amin'ny toe-pahasalamana ratsy, ary ny fihanaky ny sigara mifoka sigara eo amin'ny isam-batan'olona koa dia hampitombo ny fangatahana mpitsabo oksizenina. Ankoatr'izay, ny safidin'ny marary ny fitsaboana oksizenina ao an-trano, miaraka amin'ny fandrosoana ara-teknolojia any an-tsaha dia tokony hampitombo ny fomba fijerin'ny indostrian'ny mpamokatra oxygen.
Etsy ankilany, ny mpiorina oxygène dia malala, ka mahatonga azy ireo tsy ho zakan'ny sokajy antonony, izay miaraka amin'ny toe-javatra henjana amin'ny fitsipiky ny fahasalamana dia handoto ny fitomboan'ny tsena amin'ny ankapobeny.
Midira fizarana tsena:
Miorina amin'ny faritry ny haitao, ny tsena dia sokajina ho fitohitohizana mitohy, ary ny fatra amin'ny pulsa. Ny karazana concentrator oxygen misy karazany ao amin'ny indostria dia azo entina, ary raikitra. Mandritra izany fotoana izany, ny fidiram-bola isan-karazany amin'ny mpampiasa farany dia ny homecare, ny hopitaly ary ny hafa.
Topimaso amin'ny faritra:
Ny tatitra dia nandalina lalina ny fironana sy ny dinamika isam-paritra mba haminavina ny fanombanana rehetra ny indostrian'ny mpamokatra oksizena manerantany ny taona 2018-2026. Ny jeografia isan-karazany nofakafakaina dia i Japon, Etazonia, ary EU5 (Fanjakana Mitambatra, Espana, Italia, France, ary Alemana).
Mampiseho fifaninanana mahery vaika ny sehatry ny fandraharahana. Ireo orinasam-pananganana dia manohana hatrany amin'ny R&D hanatsarana ny portfolio'ny vokatra ary koa hanamafisana ny fahaizan'izy ireo mamokatra. Ny paikady toy ny fiaraha-miasa & fiaraha-miasa, ny fahazoana vola ary fifangaroana, ary ny famatsiam-bola dia ampidirin'ny orinasa hitazomana ny toerany eo amin'ny tsena sy hampitomboana ny valiny azo.
Fotoana fandefasana: Mey-21-2021